““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ”” | ဥက္ကာကိုကို
““၀ံသရမ်းနှင့် ဒေါက်တိုင်တိုက်ပွဲ””	Posted by oakkarkoko on August 6, 2012
Posted in: သရော်စာ, အက်ဆေး, ရောက်တတ်ရာရာ, ပြောချင်တာပြောမယ်.	Leaveacomment
အာဇာနည်နေ့က ၆၅ ထွက်သွားသလို ယခုလည်း ၄၄ အပူးပေးပြန်ပြီ။ လူဝံကြီးအိပ်မက်အရဟု သိရသည်။ အားလုံးဝိုင်းထိုးကြသော်လည်း မဟာကံထူးရှင်နှစ်ဦးသာ ပေါက်သွားသည်။ ဗွိုက်စကိုဒဂါးမားနှင့် ဘဲအတု(အာပင်ဘွိုင်း) တို့ဖြစ်၏။
ဘိုးတော်ကြီး ဘဲရင့်ပင့်ငွေက ကံထူးရှင်နှစ်ဦးအမည်ကို ကြေညာလိုက်သည့်အခါ မပေါက်သူတို့က ဖျတ်ဖျတ်လူးသွားကြသည်။
““ ဒီကိစ္စဟာ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဘဲ။ ၁၅ ယောက်စလုံးပါရမယ့်ကိစ္စကို နှစ်ယောက်တည်း ကွက်ပြီးပေးတယ်။ ကျေနပ်ဘူး… ကျေနပ်ဘူး””ဟု ပြောသူက အိတ်စပတ်ဘဲလေး ဆိုသူဖြစ်၏။
ဒီကြားထဲ ဓားခုတ်ရာလက်လျှို၊ မစားရညှော်ခံ၊ မဆိုင်တဲ့အပေါက်ဂလိုင်ဝင်ခေါက်တဲ့ မျောက်ဂျင်းနှိုက်(MJN) အဖွဲ့က မကျေမနပ်နဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားသည်။ သို့သော်သိပ်အရာထင်ပုံမရ။
မစ္စတာသာလွန်အဘိဓာန်တို့အုပ်စုကလည်း နှင်းဆီဗြူတီးဆလွန်းကို အခမဲ့ပုတ်ပြတ်ငှားရမ်း၍ လွှတ်တော်ခေါ်ယူကြ၏။
အဆိုပါ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လွှတ်တော်ကြီးသို့ ဆရာကြီးပေါင်း ၉၂ ဦးတက်ရောက်ကာ တစ်ယောက်တစ်ခွန်းဝိုင်းဝန်းအုံကြွကြသဖြင့် ၉၂ ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဟု ခေါ်တွင်သွားလေ၏။
ထိုလွှတ်တော်မှပင် သပိတ်ကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းကာ ““ပလီပလာနဲ့လာမဖိနဲ့… မအီမသာနဲ့ လာမကြည့်နဲ့… ကလီကမာနဲ့ လာမနှိပ်နဲ့… ရပ်.. ရပ်… Stop..””ဟူသည့် ကြွေးကြော်သံတစ်ရပ်ကိုထုတ်ပြန်ကြကုန်၏။
တီရှပ်အမည်းများတွင် ထိုဆောင်ပုဒ်အားရိုပ်နှိပ်ဝတ်ဆင်ကြသဖြင့် အနက်ရောင်လောကသားများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းကုန်ကြ၏။
အတိတ်စိမ်းပေးသော လူဝံကြီးက မျက်ခုံးတစ်ချက်သာ ပင့်ကြည့်လေသည်။ ဤသည်ကို မြင်လိုက်ရသူတို့က လူဝံကြီးမျက်ခုံးလှုပ်နေပဟ ဟု ဆိုကာ အားတက်ကြလေသည်။
လူဝံကြီးကား ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ဖင်ကို စူပါဂလူးဆယ်ဗူးဖြင့် အသေကပ်၍ ထိုင်ကာ ဒူးနန့်နန့် ပေါင်နန့်နန့်နှင့် သွားကြားထိုးတံကလေးကိုသာ ကိုက်၍ ပြုံးလေ၏။
လူဝံအပြုံး… လေးနှစ်လုံးဟုဆိုကာ ၄၄ အပူးကို ထပ်ထိုးရန် စိုင်းပြင်းကြပြန်၏။
တီရှပ်အနက်များရပြီ။ အားလုံး နင်ဂျာဖြစ်ကုန်သည်။
စတိုင်ထုတ်၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ ကုန်းသူကကုန်း၊ ကော့သူကကော့၊ ကောက်သူကကောက်၊ ကွေးသူကကွေးနှင့် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံရိုက်ကြသည်။
တီရှပ်တွေအော်ဒါမှာတဲ့ကောင်အသုံးမကျ၍ ဗိုက်ပူမှန်းလူသိကုန်သဖြင့် သတင်းထောက်မမများ ဆူကြပူကြလုပ်ကြ၏။ ၀ိတ်လွန်သတင်းထောက်များ မတော်သဖြင့် မ၀တ်ရ။ မျက်နှာအလွန်ငယ်နေကြသည်။
ဆူးလေရောက်သည်အထိ ခြေဦးတည့်ရာလျှောက်ကြသည်။ တချို့က ဘယ်သွားရမှန်းမသိ။ ပြီးမှ…. ၀ါးတီးရှိသည်ဟုဆိုကာ ဗွိုက်စကိုဒဂါးမားရုံးသို့ချီတက်ကြသည်။ ဒံပေါက်ကျွေးမည်ဟု တချို့က တီးတိုးပြောနေသည်။ ကြာကြာစံရအောင်ကြာဆံကြော်ကျွေးမည်ဟု မျှော်လင့်သူလည်းရှိ၏။ ဟိုရောက်တော့ မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက်မကိုက်။ ကော်ဖီသာတိုက်သည်။
ကော်ဖီအ၀သောက်ပြီး ပြန်လာတော့ လမ်းထိပ်မှာ မြို့နယ်မှူး ရဲကိုကိုနှင့် စခန်းမှူးရဲညီညီတို့ ပလက်ဖောင်းဘေးမှာ မယောင်မလည်ဖြင့် တရှုံ့ရှုံ့အနံ့ခံနေကြသည်။ နင်ဂျာဂိုဏ်းကြီးကိုမြင်တော့ ဗလီနားကပ်ပြီး ကွမ်းယာဝယ်သလို ဆေးလိပ်
၀ယ်သလို ဟန်ဆောင်ကြသည်။ မသိမသာလည်း အကဲခတ်ပြန်၏။
သို့သော် နင်ဂျာတို့ကား ၀ှီး… ၀ှီး… ၀ှစ်… ၀ှစ်… ဟု အသံစုံမြည်ကာ ကိုယ်ဖော့ပညာသုံး၍ မြို့တော်ခန်းမအနီးက ၄၅ ကားကြီးပေါ် ခုန်တက်သွားကြ၏။ အချို့ကား ကိုယ်ပျောက်ပညာဖြင့် မြေလျှိုးကြ၏။ လက်နက်ပုန်းနှင့် မပစ်သွားတာ
ကံကောင်းပေစွတကား… ဟု ရဲကိုကို၊ ရဲညီညီတို့ သက်ပြင်းချ၏။
ကားခမပါသော နင်ဂျာ ၇ ယောက် အမိုးပေါ်တက်ကပ်နေသဖြင့် စပယ်ယာမမြင်။ (မြင်လိုက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့ ယခုဖွ၏။ ပလို့ဂျိ)။
မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်နားမရောက်မီမှာတင် နင်ဂျာတွေ ကားပေါ်မှ ပျောက်၍ လမ်းပေါ်လျှောက်ပြန်၏။
မြေနီကုန်းစင်တာရှေ့ရောက်တော့ ဆီးကြိုသူတွေ တွေ့ရသည်။ တစ်ဖွဲ့က ပန်းကုံးစွပ်မည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဖွဲ့က လက်ထိပ်စွပ်မည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ပန်းကုံးစွပ်မည့်အဖွဲ့ကား အပူးအဖွဲ့ဖြစ်၏။
စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ တေးရေးဆရာ၊ စန္ဒယားဆရာ……….. ဆရာအားလုံးပေါင်းမှ ဆရာတစ်ယောက်တည်း သူဖြစ်နေသော ကို““ဘက်ကြည့်မှန်””ကြီးဦးဆောင်၍ ဆီးကြိုအားပေးကြသည်။
ကားတိုက်ခံရမည်ကြောက်၍ အပြေးအလွှားလမ်းဖြတ်ကူးသဖြင့် အရင်ဆုံးရောက်လာသည့် နင်ဂျာနှစ်ယေက်ကို ခေါင်းဆောင်ထင်၍ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ခဏကြာတော့ နယ်ခံရဲကိုကိုတစ်ဦးက ဘရိတ်ဒန့်စ်ဆွဲ၍ တားဆီးရင်း မေးသည်။
““ခင်ဗျားတို့… စာမတင်ဘဲ… လမ်းလျှောက်လာတယ်””
နင်ဂျာများ ကုလားသိုက် ကျားကိုက်သလို ပြန်ပြောကြသည်။
ရဲကိုကိုနှင့် နင်ဂျာများ အချေအတင် စကားနပန်း…Photo by- Oakkar Ko Ko
ရဲကိုကို မရမက ဆက်ပြော- ““မှတ်တိုင်ကတော့ လမ်းလျှောက်လာတာ မဟုတ်လား””
ဘက်ကြည့်မှန် ၀င်ပြော – ““လမ်းလျှောက်မလာလို့ ဈာန်နဲ့ပျံလာရမှာလား”” ထိုသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ပြောဆိုကြပြီးမှ အာပင်ဘွိုင်းရုံးပေါ်သို့ တင်ခွင့်ရကြ၏။
ထုံးစံအတိုင်း ၀ါးတီးရှာသူများ မှန်းချက် နှမ်းထွက်မကိုက်။ ရေသာတိုက်၏။
ဆက်ရက်မောင်မောင်က နင်ဂျာများနှင့် ဘက်ကြည့်မှန်ရှေ့တွင် သူဟာ အပူးလေးလုံးနှစ်တုန်းက ကျောင်းသားတွေနှင့်အတူ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း မိန့်ခွန်းချွေသည်။
ဘက်ကြည့်မှန်ကြီး ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြင့် ရှေ့သွားလေးထွက်ကာ အံ့သြရှာ၏။
““.… သြ …. ””
ထိုစဉ်လူအုပ်ကြားမှ လွမ်းဆွတ်တမ်းတဖွယ် အသံနက်ကြီးက ဟိန်းခနဲထွက်လာသည်။
““ပုန်း….. နေတာပါ…. ကွာ””
မှတ်ချက်။ ။ သရော်စာသက်သက်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ထိခိုက်နစ်နာစေလိုမှုမှ မပါဝင်ပါကြောင်း။
ရေးသားသူ- ဥက္ကာကိုကို၊ သံချောင်း၊ မင်းထက်စံ
← သမ္မတနှင့်တွေ့ဆုံတော့မည့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း	ငါတို့ခေတ် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...